August 13, 2020 – Xorriya Online
Imaaraadka Carabta iyo Israel oo ku heshiiyey inay xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta iyo Israel ay isku raaceen inay sameystaan xiriir diblomaasiyadeed, kaasi oo qeyb ka ah heshiis ay Israel ku hakineyso goosashada dhulka Daanta Galbeed. Arrintan ayaa ka dhigeysa Imaaraadka Carabta dalkii ugu horreeyey oo ka mid ah kuwa Khaliijka, iyo dalkii saddexaad oo xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah […]
Dowlada Mareykanka oo war kasoo saartay doorashada dalka iyo shirka Dhuusomareeb 3
Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay kaga hadashay xaalada dalka gaar ahaan doorashada soo dhaw iyo shirka Dhuusomareeb. Safaarada ayaa qoraal ay soo dhigtay barteed Twitterka ku sheegtay iney aad u sugeyso natiijada kasoo baxdo shirka Dhuusomareeb sidoo kalana doorashada waqtigeeda ku dhacdo. Qoraalka safaarada ayaa wuxuu imaanayaa xili shaki weyn kaga […]
Shiinaha oo xoghayaha Mareykanka Mike Pompeo ku eedeeyay inuu faafinaayo Feyras siyaasadeed
Afhayenka Wasaaradda Arimaha Dibadda Shiinaha Zhao Legian ayaa wuxuu sheegay in Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Mike Pompeo uu si joogto ah u dhalleeceeyo una eedeeyo Shiinaha meelkasta oo uu aado, sidaas darteedna uu yahy qof faafiyo macluumaad marin habaabin ah “Feyras siyaasadeed”. “Pompeo meel kasta oo uu aado, wuxuu sidaa oo uu ku faafiyaa […]
Dowlada Federaalka Soomaaliya oo ciidamo hor leh geysay Gobolka Gedo
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo cusub geysay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolow. Ciidamadaqn oo magaalada Muqdisho laga daabulay ayaa waxaa halkaasi lagu geeyay diyaarad ayagoona ku biiri doono ciidamadii Dowlada horay uga joogay gobolkaas. Ciidamada Haramcad kuwa Gorgor iyo Milatariga Soomaaliya ayaana dhaqdhaqaaq Milatari halkaas kawado waxaana xusid mudan in ciidamadaas ay horay isugu […]
Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabeele oo xilka laga qaaday iyo qofka lagu badalay
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare ayaa xil ka qaadis ku sameeyay Wasiirka Beeraha iyo waraabka maamulkaas ee Cali Xaaji Cabdulle (Isgoowe). Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweyne Waare ayaa lagu sheegay in markii uu arkay dardar gelinta howlaha adag ee horyaalla Wasaaradda in xilka Wasiirka Beeraha Iyo Waraabka Hirshabeelle laga qaaday Xildhibaan Cali […]